Iran: Lavin’ireo Vehivavy Ny Rakakaben’ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2012 22:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Dansk, Ελληνικά, Swahili, 한국어, বাংলা, Deutsch, عربي, English
Vavy= Lahy, Loharano: Khodnevis
Ny fitondrana Islamika Iraniana dia nanao tsinontsinona ny Andro Manerantany Natao Ho An'ny Vehivavy efa nandritra ny ho telopolo taona mahery. Tsy mampihatra ny 8 Martsa io firenena io, ary mandràra mihitsy ireo fikambanam-behivavy aza mba tsy hankalaza izany andro izany. Saingy isan-taona ireo vehivavy Iraniana, na izany eo amin'ny fiainana andavanandro, na any anatin'ny tontolo virtoaly dia manohy mankalaza ihany.
Satria manaikitra ny sazy iraisam-pirenena ary miakatra hatrany ny fihenjanana mikasika ny fandaharan'asa nokleary Iraniana, tamin'ity taona ity dia marobe ireo mafàna fo nampakatra lahatsary tao amin'ny Tranonkala natao ho an'ny zon'ny vehivavy Change for Equality manambara hoe, “Toheriko ny ady.”
Ireo mafàana fo ireo dia miteny hoe :
Ny ady tsy hoe baomba fotsiny su faharavan'ny tranonay. Aty alohan'ny hirotsahantsika amin'ny ady aza, dia efa hita toa mihasarotra sahady ho an'ny vehivavy ny fiainana. Mitodika amin'ireo vehivavy ny ady ary mikisaka manakaiky, tsikelikely. Tsy te-ho ireo mangina fotsiny mitaty ny zava-doza entin'io rakakabe izahay. Ny 8 Martsa 2012 raha noraràna tsy ho afa-mankalaza ilay andro na haneho ny fangatahany teny an-dalambe, dia noraisinay io fotoana io hilazàna fa toherinay ny ady ary ny tsirairay amin'ireo lahatsary fohy ireo dia maneho ny anton'izay fanoheranay izay.
Ny tena zava-misy any ambadik'ireo sary momba ny ady
Tsy misy fambara loza ho an'ny ankizy
Mamela holatra amin'ireo vehivavy ny ady
Tena rakakabe tokoa ny ady, saingy indrisy tena izay ny atao hoe jadona sy fonja. Ilai Iraniana bilaogera Jaarchi dia mampahatsiahy [fa] antsika fa vehivavy 47 no voafonja ao Iran noho ny hetsika ara-tsosialy sy ara-politika nataony.